Xildhibaan Faroole oo soo jeediyey in Baaritaan lagu sameeyo Weerarkii Af-urur[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Xildhibaan Faroole oo soo jeediyey in Baaritaan lagu sameeyo Weerarkii Af-urur[Dhageyso]
Dr Cabdiraxmaan Faroole
MUQDISHO – Madaxweynihii hore ee Puntland kana tirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole ayaa soo jeediyey in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dagaalkii ka dhacay deegaanka Af-urur ee u dhaxeeyey ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Faroole ayaa ugu horeyn tacsi u diray dhammaan dadkii iyo ciidamadii ay dhibaatadu kasoo gaartay dagaalkaas.
Wuxuu mar kale soo jeediyey in la sameeyo baaritaan degdeg ah maadaama falkaas uusan horay uga dhicin Puntland iyo Buuralayda Galgala oo ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Faroole oo xiligan ku sugan dalka Australia ayaa maamulka Puntland ugu baaqay iney isugu yeerto dadweynaha iyo saraakiisha ciidamada ku xeel dheer arrimahaas si wax looga qabto xaalada ka jirta gobolka Bari.
Wuxuu sheegay in culayska kooxda Al-Shabaab ka saaran koonfurta dalka ay sabab u tahay iney si dhuumaaleysi ah kusoo galaan deegaanada Puntland iyagoo doonaya iney weeraro argagaxiso ka fuliyaan.
Maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidamada Daraawiishta Puntland ku leeyihiin deegaanka Af-urur ee dhaca buuraha Galgala halkaasoo ay ku dhimatay 50 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah.